IMelika ithi iCongo kumele ibambe ukhetho ngonyaka ozayo | News24
IMelika ithi iCongo kumele ibambe ukhetho ngonyaka ozayo
Kinshasa -I-Democratic Republic of Congo kumele ikhethe uMengameli ozothatha isikhundla sikaJoseph Kabila ungakapheli unyaka ozayo.
Lokhu kuvezwe yiNxusa laseMelika ngoLwesihlanu lapho liveze ukuthi uma lolu khetho lungenzeki i-DRC ngeke isalilekelela ngalutho leli lizwe.
Ukubambezeleka kwalolu khetho okwakumele lube ngonyaka ka-2016 yikona okuqinisa ukungabekezelelani kosopolitiki kuleli lizwe kanti kunokwesabela ukuthi lungahle luqale phansi udlame oseludlule nempilo yezigidi zabantu.
OLUNYE UDABA:Kuphinde kwasuka isidumo eCongo
UNikki Haley waseMelika ubenomhlangano nokhomishana wezokhetho eCongo ngesikhathi evakashele eKinshasa, utshele abezindaba ukuba ufike walubika udaba lokuthi kumele kube nokhetho ngonyaka ozayo, kungenjalo, ngeke basalixhasa izwe ezinhlelweni zalo zokhetho.
Ekuqaleni kwale nyanga, ukhomishana wokhetho kuleliya lizwe uveze ukuthi ukhetho lokugcwalisa isikhundla sikaKabila ngeke lwenzeke ngaphambi kuka-Ephreli 2019, kodwa iqembu eliphikisayo lizwakalisa ukuthi lizozithathela lona izinyathelo uma ukhetho lungenziwa.
Kwenzeka lokhu nje, eKenya sekubheduke udlame njengoba kuqhubeka ukhetho lokuqoka umengameli, kulandela ukuthi imiphumela yokugcina yaphikwa ngamaqembu aphikisayo.